ဘဝမှတ်တိုင်: နတ်စစ်သည်တော်လေးနေရာက ကစားရင်း သင်္ကြန်မှာ နတ်သားလေး ရေမစိုစေအောင် ကစားရမည့် မြန်မာဂိမ်း
နတ်စစ်သည်တော်လေးနေရာက ကစားရင်း သင်္ကြန်မှာ နတ်သားလေး ရေမစိုစေအောင် ကစားရမည့် မြန်မာဂိမ်း
သင့်လက်ချောင်းလေး တွေလှုပ်ရှားမှု ဘယ်လောက်မြန်ပါသလဲ? ရေမစိုပဲ သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေနိုင်မလဲ နတ်စစ်သည်တော်နေရာက ကစားရင်း သင်္ကြန်မှာ နတ်စစ်သည်လေး ရေမစိုစေအောင် ကြိုးစားကြမယ်လေ။ ဘယ်တော့မှထပ်မသွားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကစားရမှာမို့ ဒီလောက်စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းကို သင်ဘယ်တော့မှ ပျင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး! သင်တစ်ယောက်ထဲပဲ ကစားကစား သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဆော့ဆော့ အမြင့်ဆုံး အမှတ်ကိုတော့ ရအောင်ကြိုးစားပါ။
ဘယ်တော့မှမထပ်တဲ့ ဂိမ်းကစားနည်းမို့ မဆုံးနိုင်သော ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်ခြင်း
အမှတ်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုရယူလိုက်ပါ
Credit : http://mysquar.com/
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/11/2014 05:27:00 pm